မြင်နေကျ ပုံစံလေးတွေနဲ့ ကွဲထွက်နေပြီး လူမှားသွားလောက်အောင် မိမိုက် လွန်းနေတဲ့ အိန်ဂျယ်လမုန် – Let Pan Daily
ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ အချစ်တော် မော်လ်ဒယ်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေး အိန်ဂျယ်လမုန် ကတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှလေးတွေကြောင့် ပုရိသပရိသတ်တွေကြား အမြဲရေပန်းစားနေသူလေးပါ..။ အရပ်ရှည်ရှည်နဲ့ စမတ်ကျသလို ဖြူဖွေးဝင်းဥနေတဲ့အသားအရေလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးချိုချိုလေးတွေအပြင် စကားပြောပွင့်လင်းတဲ့ ဟန်ပန်လေးတွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက အချစ်ပိုနေကြတာပါ..။
နိုင်ငံခြားသူလေးတစ်ယောက်လို ညို့အားပြင်းတဲ့အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အိန်ဂျယ်လေးကတော့ သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို အမြဲမျှဝေလေ့ရှိသူလေးပါပဲ..။ အခုတစ်ခါမှာလည်း အိန်ဂျယ်လေးတစ်ယောက် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူမရဲ့ဟန်ပန်လေးတွေနဲ့ ကွဲထွက်နေပြီး မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ အထာကျကျ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားလိုက်ပြန်ပါတယ်နော်..။
“Angel in the shadow. .” ဆိုပြီး အထာ ကျကျလေး ဆွဲအားပြင်းနေတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေကို အိန်ဂျယ်လမုန်က ပရိသတ်တွေ ဝေမျှထားတာပါနော်..။ အဲ့ဒီပို့စ်ရဲ့အောက်မှာတော့ ပရိသတ်တွေကလည်း အိန်ဂျယ်လေးရဲ့ မိမိုက်နေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို သဘောကျအချစ်ပိုနေကြတဲ့အကြောင်းလေးတွေ မှတ်ချက် ပေးထားကြပါတယ်နော်..။
Photo Credit – Wai Lin x Angel Lamung
ပရိသတ္ႀကီးတို႔ရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ ေမာ္လ္ဒယ္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီးေခ်ာေလး အိန္ဂ်ယ္လမုန္ ကေတာ့ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ အလွေလးေတြေၾကာင့္ ပုရိသပရိသတ္ေတြၾကား အၿမဲေရပန္းစားေနသူေလးပါ..။ အရပ္ရွည္ရွည္နဲ႔ စမတ္က်သလို ျဖဴေဖြးဝင္းဥေနတဲ့အသားအေရေလးနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့အၿပဳံးခ်ိဳခ်ိဳေလးေတြအျပင္ စကားေျပာပြင့္လင္းတဲ့ ဟန္ပန္ေလးေတြေၾကာင့္လည္း ပရိသတ္ေတြက အခ်စ္ပိုေနၾကတာပါ..။
ႏိုင္ငံျခားသူေလးတစ္ေယာက္လို ညိဳ႕အားျပင္းတဲ့အလွတရားေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အိန္ဂ်ယ္ေလးကေတာ့ သူမရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေလးေတြကို အၿမဲမွ်ေဝေလ့ရွိသူေလးပါပဲ..။ အခုတစ္ခါမွာလည္း အိန္ဂ်ယ္ေလးတစ္ေယာက္ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ သူမရဲ႕ဟန္ပန္ေလးေတြနဲ႔ ကြဲထြက္ေနၿပီး မိမိုက္လြန္းေနတဲ့ အထာက်က် ပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြကို ဖမ္းစားလိုက္ျပန္ပါတယ္ေနာ္..။
“Angel in the shadow. .” ဆိုၿပီး အထာ က်က်ေလး ဆြဲအားျပင္းေနတဲ့ သူမရဲ႕ အမိုက္စားပုံေလးေတြကို အိန္ဂ်ယ္လမုန္က ပရိသတ္ေတြ ေဝမွ်ထားတာပါေနာ္..။ အဲ့ဒီပို႔စ္ရဲ႕ေအာက္မွာေတာ့ ပရိသတ္ေတြကလည္း အိန္ဂ်ယ္ေလးရဲ႕ မိမိုက္ေနတဲ့ပုံရိပ္ေလးေတြကို သေဘာက်အခ်စ္ပိုေနၾကတဲ့အေၾကာင္းေလးေတြ မွတ္ခ်က္ ေပးထားၾကပါတယ္ေနာ္..။
ညဝတ် ဖက်ရှင်လေးဝတ်ကာ ဖြူဝင်းဥပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်းတဲ့ ရင်ခုန်စရာ အလှတရားတွေ နဲ့ ပရိသတ်တွေ ကို ကြွေစေပြန်တဲ့ ရွှေပိုးအိမ်
ပုရိသတွေ ရင်ဖိုစရာ ဆက်ဆီ ကျလွန်းတဲ့ ဗီဒီယိုလေး တစ်ခုတင်ပေး လိုက်တဲ့ သဇင်ဦး